Isidlo Sakusasa seWhiteand River Bed n - I-Airbnb
Isidlo Sakusasa seWhiteand River Bed n
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguShawn
Ifama entle ibekwe kufutshane neYorkton kunye nemizuzu kude neGood Spirit Lake, iGoose Lake kunye neMadge Lake. Iindlela zokuhamba ngeendlela ezininzi zamaqunube asendle kunye nomlambo ofikelelekayo kwipropati. Indawo yabucala yokubukela izilwanyana zasendle kunye nokonwabela imililo yenkampu. Idesika encanyathiselweyo ibandakanya ukusetyenziswa kwebbq.
Zininzi izinto ezifumanekayo ezifana nokukhwela ibhayisekile entabeni, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukukhwela ikhephu kunye neyoga. Indawo yi-15 min drive kumantla eYorkton
Jonga iphepha lethu le-Instagram "I-Whitesandriver Adventures"
Indawo yegadi, iindlela zendalo, umlambo, igumbi labucala kunye negumbi lokuhlambela phezulu.
Zibandakanye kwindalo engqongileyo kunye neembono zeprairie. Hamba ecaleni komlambo, landela iindlela kwiindlela zethu kwaye uphumle malunga ne-firepit. Yonwabela i-hammocks ukuya kunye nokutyelela rhoqo ukusuka kumaxhama, i-moose kunye neetoni zeentaka kunye nezinye izilwanyana zasendle. Iindlela ze-snowmobile zikufutshane kunye kunye nohambo olufutshane ukuya kumachibi asekuhlaleni ukuloba okanye ukubetha elunxwemeni.
Ifumaneka ngesicatshulwa ngolwazi oluthe vetshe